Mabhenefiti mashanu emabhodhoro egirazi mumusika wekurongedza
Parizvino, mundima yekupakata yemusika wepamba, zvigadzirwa zvekutakura zvakasiyana siyana, kunyanya mapurasitiki (chimiro: chakagadzirwa nebwe, plasticizer, stabilizer, ruvara) kuputira mabhodhoro, inotora hafu yemusika wepasi-wekupedzisira muindasitiri yezvinwiwa. Jiangshan, m ...
Mabhodhoro egirazi anonyanya kushandiswa kurongedza zvigadzirwa mune zvekudya, waini, chinwiwa, mishonga uye mamwe maindasitiri. Mabhodhoro egirazi uye magaba ane hutano hwakanaka hwemakemikari uye haatapurirane nechomukati. Iwo akachengeteka kushandisa nekuda kwemhepo kuomarara uye yakakwirira ...
2020-2025 kukura maitiro uye fungidziro yegirazi bhodhoro musika
Mabhodhoro egirazi nemidziyo yegirazi zvinonyanya kushandiswa muindasitiri yedoro uye isiri-doro chinwiwa, icho chinogona kuchengetedza kusagadzikana kwemakemikari, kusagadzikana uye kusagadzikana. Iko kukosha kwemusika wemabhodhoro egirazi nemidziyo yegirazi muna 2019 yaive US $ 60.91 bhiriyoni uye inotarisirwa kusvika US $ 77.25 bhiriyoni ...